Soosaarka bacda warqadda Shiinaha iyo Warshad | JAHOO
Qeexitaanka alaabta Shayga Alaabada Rakibka ah ee Dib loo warshadeeyay Logo Daabacaadda Daabacaadda daabacaadda Farshaxan Brown Kraft Paper Bag Iyadoo ay kujiraan boorsooyinka warqadda cuntada Xajmiga 5.25x3x8.5 inji, 8 × 4.75 × 10 inji, 10x5x13 inji, 16x6x12 inji, ama Lahabeeyay. bacda warqad cunto oo dhumucdiisuna waxay 80gsm, 90gsm, 100gsm ...
Shayga Logo Dib-u-warshadeyn ah Logo Custom daabacay Baako Baako Raashinka Farshaxan Brown Kraft Paper Bag Iyadoo qabta bacda warqadda cuntada
Cabir 5.25x3x8.5 inji, 8 × 4.75 × 10 inji, 10x5x13 inji, 16x6x12 inji, ama Customized. bacda warqadda cuntada
Dhumucdiisuna 80gsm, 90gsm, 100gsm, 110gsm, 120gsm ama kiishka warqada cuntada loogu talagalay
Nooca khad Boorsada warqadda cuntada ee Soy Ink-ku saleysan Eco-friendly
Waxyaabaha Maqaarka Brown / Paper Kraft, White Craft / Kraft Paper, or Custom Paper
Muuqaalka FSC Shahaado 100% Recyclable, Automatic Machine Making, Eco-saaxiibtinimo, waara, iyo Daabacaadda Nice sax ah.
Nooca Gacanta Gacmo qalloocan, Fududeeyaha Flat, Ribbon, PP Rope, Cotton, Nylon, Die-cut ama Customized Handle
Dhammeystirka dusha sare Varnishing, dhalaalaya / Matt Lamination, Dahab / Silver Shabaqa kulul, Embossing, UV daahan, bireed jediyay, Hologram Saamaynta, iwm
Codsiga Dukaameysi, Hadiyad, Aroos, Grocery, Badeecad Tafaariiq ah, Xaflad, Dhar, Dallacaad, Makhaayad Qaadasho, iwm.
Shahaadooyinka FSC, SGS, BSCI, ISO9001: 2008, iwm
Logo Dib loo Isticmaalay Logo Custom daabacay Baako Baako Raashinka Farshaxanka Brown Kraper Paper Bag Iyadoo qabashada
S: Sideen kugu aamini karaa?
J: Waxaan nahay warshad daabacan oo kutaala Wenzhou, Gobolka Zhejiang. Waxaan haynaa mashiinno badan oo horumarsan si aan u hubino tayada badeecadeena dhammaan macmiilkeenna. Fadlan xor u noqo inaad na soo booqato
J: Fadlan noo soo dir baaris ku saabsan maadada, cabirka, farshaxanka iyo tirada. Haddii kale, waad noo soo diri kartaa sawirrada iyo fikradaha, waxaannu ku siin doonnaa talooyinkeenna xirfadeed ee codsigaaga.
S: Goorma ayaa amarkayga la dirayaa?
J: Caadi ahaan waqtiga wax soo saarku waa 15-20 maalmood Kalandarka. Haddii amarkaagu yahay mid deg deg ah, waxaan u diyaarin karnaa sida mudnaanta leh. Fadlan la xiriir iibkeenna si aad u hesho jadwal aad u sax ah.
S: Ma heli karaa muunad ka hor intaanan dalban?
J: Waxaan bixin karnaa badeecooyin la mid ah oo bilaash ah oo aan u soo saarnay jeeg tayo leh, halka adigu aad iska bixinayso kharashka dhoofinta Haddii aad rabto inaad caadaysato muunad jireed oo ah shuruudahaaga waxaa jiri doona kharashyo ku lug leh. Si kastaba ha noqotee, tani waxay noqon kartaa lacag celin marka la soo saaro tiro badan.
S: Sideen ku bixin karaa?
A: Waxaan aqbalnaa qaababka lacag bixinta ee kala duwan, sida T / T, dammaanadda ganacsiga, paypal…
Habka ugu fiican waa amarka hubinta ganacsiga, iibkeenu wuxuu kuu soo diri doonaa xiriiriye lacag bixin ah, waxaadna ku bixin kartaa khadka tooska ah.
Hore: sanduuqa baastada
Xiga: baaldi warqad